Sun, Aug 19, 2018 | 07:17:25 NST
15:09 PM (3months ago )
युवाले आफै कमाउन सकून् र विदेश पलायन रोकियोस भन्ने कोष निर्माकर्ताको चाहना थियो । सोही बमोजिम कोष जमानी बसेर उद्यम गर्न चाहने युवालाई विभिन्न बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट ऋण दिन थालियो । अहिले पनि यसैगरी ऋण दिइँदै आएको छ । व्यक्तिले उद्यम गर्न चाहेमा प्रतिव्यक्ति २ लाख रुपैयाँ र समूहमा उद्यम गर्न चाहेमा २५ जनाको समूह बराबर ५० लाख रुपैयाँका दरले कोषले सहकारी संस्थामार्फत ऋण उपलब्ध गराउँछ । कोषले सुरुमा १० प्रतिशत ब्याजमा ऋण उपलब्ध गराउँछ ।
ऋणमा व्यक्ति तथा उद्योगको निःशुल्क बिमा र त्यसवापतको प्रिमियम पनि समावेश गरिएको हुन्छ । कोषले तोकेको समयमा ऋण चुक्ता गरेमा ब्याजको ६० प्रतिशत रकम फिर्ता पनि पाइन्छ । कोषले आफू साक्षी बसेर विभिन्न सहकारीलाई ऋण दिन्छ र सहकारीले युवा स्वरोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत विभिन्न युवालाई ऋण दिन्छन् ।
यसरी ऋण लिएर काम थालेका केही युवाले उल्लेख्य प्रगती गरेका छन् भने कोषको ग्यारेण्टीमा पाएको ऋण परिचालन गरेर केही सहकारीले पनि राम्रो प्रगती गरेका छन् । तर केही सरकारी संस्थाले भने कोषबाट लगेको रकम तिरेका छैनन् । यसरी ऋण नतिर्नेमा धेरैजसो राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्ताले ग्यारेण्टी गरेका सहकारी छन् ।
पटक पटक ताकेता गर्दा पनि ऋण नउठ्ने देखेपछि कोष अहिले त्यस्ता सहकारी तथा सञ्चालकको सम्पत्ति रोक्का गर्नेदेखि उनीहरुलाई कालोसूचीमा राख्नेसम्मको तयारीमा लागेको छ । केही सहकारी र तिनका सञ्चालकको सम्पत्ति त रोक्का पनि भैसकेको छ ।
नेताका सहकारीले १२ करोड तिरेनन्, कुन सहकारीको ऋण कति ?
२०६५ सालयता युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले झण्डै २ हजार सहकारी संस्थामार्फत ५ अर्वको हाराहारीमा ऋण प्रवाह गरेको छ् । यसबीचमा देशभरी प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष गरी ५० हजार युवा स्वरोजगार बनेको कोषको दावी छ ।
लगानी गरेको ५ अर्बमध्ये झण्डै ३५ करोड रकम उठ्न बाँकी छ । यसमध्ये झण्डै आधा रकम त विभिन्न दलका नेता र नेताका आफन्तका सहकारीमा डुबेको छ । साना सहकारीबाट ऋण उठिरहेको र उठाउन सकिने तर नेता र उनीहरुका आफन्तका नाममा रहेका सहकारी संस्थाबाट पैसा उठाउन भने कोषलाई हम्मेहम्मे परेको कोषको भनाई छ ।
कोषका कानुन तथा असुली शाखाका प्रमुख ज्ञानहरि देवकोटा भन्नुहुन्छ, ‘हामीले जिल्ला जिल्लामा अनुगमन गर्दा ऋण नर्तिनेमा धेरै सहकारी राजनीतिक दल र उनीहरुका नेता नजिकका रहेका पाएका छौं, त्यस्तै भोट पाउने आशामा केही दलका नेताले कोषको ऋण नतिर्नु पछि मिनाह भैहाल्छ नि भन्ने गरेको पनि पायौं, तर अब भने उनीहरुविरुद्ध कडा कदम चाल्दैछौं ।’
ऋण नर्तिने ठूला सहकारी संस्था
कोषले हरेक ३÷३ महिनामा बिभिन्न बै‌ंकबाट तथ्याङ्ख अद्यावधिक गरेर कसले कति ऋण तिर्न बाँकी छ भन्ने तथ्याङ्ख निकाल्ने गर्छ । ३ महिनाअघि अद्यावधिक गरिएको तथ्याङ्ख अनुसार केही ठूला सहकारीले करोडौ रकम बुझाउन बाँकी छ । यसरी ऋण नतिर्ने सहकारी कि त राजनीतिक पार्टीका नेताका नजिक छन्, कि त उनीहरुबाट संरक्षित ।
हाम्रो सगरमाथा बहुद्देश्य सहकारी संस्था लिमिटेड : यो सहकारी संस्थामा राष्ट्रिय सहकारी बैंकका प्रवन्ध केबी उप्रेतीको लगानी छ । उप्रेती एमालेका नेता हुन । उनी सहकारी क्षेत्र अगुवा पनि मानिन्छन् । उनको हाम्रो सगरमाथा बहुद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडले युवा स्वरोजगारको लागि ५ करोड रुपैयाँ रकम लगेको थियो ।
तर ५ बर्षमा तिर्नेगरी लिएको ऋण समय सकिएको लामो समय बित्दा समेत सहकारीले ३ करोड ३० लाख रुपैयाँ अझै तिरेको छैन । मजदुर सहिद स्मृति उपभोक्ता सहकारी संस्था तिनकुने काठमाडौं : माओवादी नेता गणेश रेग्मीको नाममा रहेको यो सहकारी संस्थाले पनि कोषलाई ४ करोड ५२ लाख रुपैयाँ ऋण तिरेको छैन । ५ करोड ऋण लगेको यो संस्थाले अहिलेसम्म जम्मा ४८ लाख रुपैयाँ मात्रै तिरेको छ । यो सहकारी संस्थाले ऋण लैजाँदा माओवादीका धादिङका नेता तथा अहिले प्रदेश नम्बर ३ का मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल पनि साक्षी बसेको कोषले जनाएको छ ।
नेपाल केन्द्रीय जडिबुडी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेड : पहिले माओवादी र अहिले नेता भक्तबहादुर साहको लगानी रहेको नेपाल केन्द्रीय जडिबुटी उपभोक्ता सहकारी संस्था लिमिटेडले १ करोड ५० लाख रुपैयाँ लगेकोमा ब्याजसहित १ करोड ५१ रुपैयाँ कोषलाई बुझाउन बाँकी छ ।
मधुवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था : माओवादीका गुल्मीका नेता तथा नेकपा माओवादी केन्द्र महाधिवेशन आयोजक समितिका सदस्य बेगम चन्दको लगानी रहेको मधुवन सहकारी संस्थाले युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषबाट १ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण लगेको थियो ।
योङ कम्युनिष्ट लिग वाइसिएलका तत्कालीन अध्यक्ष चन्द्रबहादुर थापा सागरको संरक्षकत्वको मधुवन सहकारीले १ करोड ८० लाख रुपैयाँ कृषीमा लगानी गर्ने भनेर ऋण लगेको थियो । तर तीनमहिना अघिको तथ्याङ्ख हेर्दा संस्थाले कोषलाई ५२ लाख ९२ हजार रुपैयाँ ऋण अझै पनि तिरेको छैन् ।
केन्द्रीय फलफूल तथा तरकारी सहकारी संघ लिमिटेड : एमाले काभ्रेका नेता विनोद पराजुलीको यो संस्थाले पनि कोषको ऋण तिरेको छैन । धुलीखेल नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष समेत रहेका विनोद पराजुलीको केन्द्रीय फलफूल तथा तरकारी सहकारी संघ लिमिटेडले १५ लाख रुपैयाँ ऋण लगेकोमा १४ लाख ६९ हजार रुपैँया ऋण तिर्न बाँकी छ । अथवा व्याज बाहेक उनको संस्थाले ३१ हजार रुपैयाँ मात्र सावाँ रकम तिरेको छ ।
ऋण नतिर्नेको सम्पत्ति रोक्का, कालोसूचीमा राख्ने तयारी
युवा तथा साना व्यावसायी स्वरोजगार कोषले तोकिएको समयमा ऋण नतिर्ने सहकारी संस्था, तिनका सञ्चालक, लेखा समितिका सदस्य र ऋण उपसमितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति रोक्का गर्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । कयौंको त सम्पत्ति रोक्का पनि भैसकेको छ ।
अहिलेसम्म ६१ वटा सहकारी र तिनका २ सय ४४ जना सञ्चालक तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति रोक्का गरि सकिएको कोषका कानुन तथा असुली शाखाका प्रमुख ज्ञानहरि देवकोटाले जानकारी दिनुभयो । बाँकी ११ सय जना सहकारी सञ्चालक, लेखा समितिका सदस्य र ऋण उपसमितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति पनि रोक्का गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको कोषले जनाएको छ । यसमध्ये केही सहकारी संस्थाले ऋण चुक्ता गरेकाले सम्पत्ति फुकुवा पनि भैसकेको छ ।
‘साना सहकारी संस्थाको त सम्पत्ति रोक्का मात्रै भएको छ, करोड भन्दा माथि ऋण लगेर नतिर्ने ठूला सहकारी संस्था र तिनका सञ्चालक तथा लगानीकर्तालाई त हामीले कालोसूचीमै राख्ने प्रक्रिया पनि सुरु गरेका छौं’ कोषका कार्यकारी उपाध्यक्ष डाक्टर प्रेम दंगालले भन्नुभयो, ‘कसैलाई यो छुट हुन्न, सरकारको यो राजश्व, नागरिकको यो सम्पत्ति, हामीले बैंक वित्तीय संस्थाबाट लिएको यो कर्जा, यो तिर्न पर्दैन हिनामिना गरे पनि हुन्छ भन्ने कसैले सोचेको छ भने त्यो नसोच्दा पनि हुन्छ ।’
ऋण लगेका संस्थाका प्रतिनिधि भन्छन् ‘बाध्यताले तिर्न सकेका छैनौं’
युवा तथा साना व्यवसायी स्वरोजगार कोषले ऋण नतिर्ने संस्था तथा सञ्चालक समितिका सदस्यको सम्पत्ति रोक्ने र कालोसूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु हुँदा कोषबाट ऋण लगेर नतिर्ने व्यक्ति वा संस्थाले भने कोषले आरोप लगाए जस्तो राजनीतिक आवरण भएकैले ऋण नतिरेको नभई आफूहरुले लगानी गरेको पैसा नउठेको कारण कोषलाई पैसा तिर्न नसकेको बताएका छन् । बरु कोष नै असहयोगी बनेको उनीहरुको आरोप छ ।
‘कोषबाट ऋण लिएर हामीले बाख्रापालन गर्ने किसानमा लगानी गरेका थियौं, धेरैजसो बाख्रा रोगले मरे, तर किसानले बाख्राको बिमा गरेको पैसा कोषले दिन मानेन । हामी यत्तिकै डुब्यौं’ कोषलाई १ करोड ८० लाख रुपैयाँ ऋण तिर्न बाँकी रहेको मधुवन बचत तथा ऋण सहकारी संस्था गुल्मीका सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बेगम चन्दले उज्यालो अनलाइनसँग भन्नुभयो, ‘बिमाको पैसा उपलब्ध गराउनुको सट्टा उहाँहरुले कालोसूचीमा राख्ने र सम्पत्ति रोक्का गर्ने धम्की दिँदा अचम्म लागेको छ ।’
तर कोषले त नियमित किस्ता तिर्ने व्यक्ति तथा संस्थाको मात्रै बिमाको प्रिमियम रकम तिरिदिने भनेको छ नि ? भन्ने प्रश्न गर्दा चन्दले भन्नुभयो, ‘किसान बाख्रा मरेर तनावमा थिए, लगानी नै मरेपछि उनीहरुले किस्ता पनि कसरी तिर्न सक्छन त ! यो कुरालाई राजनीतिक आवरण नभनि दिनुहोला, समस्या परेर नै पैसा तिर्न नसकेको हो ।’
कोषबाट दिने भनेको ऋण युवालाई स्वरोजगार बनाउन नभई व्याज असुलेर सीमित व्यक्ति धनी बन्नकै लागि लगानी भएको चन्दको आरोप छ । यस्तै केन्द्रीय फलफूल तथा तरकारी सहकारी संघ लिमिटेडका सञ्चालक, एमाले नेता तथा धुलिखेल नगरपालिका वडा नम्बर ३ का वडाध्यक्ष विनोद पराजुलीले पनि १४ लाख ६९ हजार रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहको कोषले जनाएको छ । तर पराजुलीले भने आफूहरुले बिभिन्न समयमा पैसा बुझाए पनि बैंकहरुले भौचर दर्ता नगरेकाले धेरै पैसा तिर्न बाँकी रहेको देखिएको बताउनुभएको छ ।
‘हामीले पनि संस्थालाई लगानी गरेका थियौं संस्थाले हामीलाई चुक्ता नगरेकाले हामीले पनि तिर्न पाएका छैनौं, तर पछिल्लो ३ महिनामा मात्रै एकपटक ७ लाख ७५ हजार र अर्कोपल्ट १ लाख ७५ हजार रुपैयाँ बुझाएका छौं, त्यो चाहिँ इन्ट्री नभएको हुन सक्छ’ पराजुलीले भन्नुभयो, ‘अब ३÷४ लाख रुपैयाँ उठन बाँकी छ, सायद यो हप्ताभित्र हामी तिरिसक्छौं ।’
कोषबाट लिएको रकममा थपथाप गरेर चाबहिलमा कृषि फर्म खोल्न खोजे पनि सहकार्य गर्ने व्यक्ति नभएर फर्म खोल्न नसकिएको र ऋण तिर्न समस्या भएको उहाँको भनाई छ